5 mishonga yechisikigo yekurapa stretch marks | Bezzia
Tony Torres | 13/01/2022 20:00 | Runako manomano
Mavara ekutambanudza anoonekwa paganda kana akatambanudzwa zvakanyanya uye fiber inopa collagen uye elastin kuburikidza nedermis break. Munguva dzekutanga, mavanga aya anoratidzwa neruvara rutsvuku kana rwepurplishsemhedzisiro yekuputsika kwefiber. Mushure mezvo, vanoshanduka kuchena uye vanogara paganda zvachose.
Kana ma stretch marks aonekwa anogona kurapwa, chitarisiko chinogona kuvandudzwa kuita kuti mavanga asaonekwe. Asi kana vangogara, pavanenge vachena, zvakaoma zvikuru kubvisa. Kwete kunyange iyo inodhura kwazvo kabhini marapirwo inopa mhedzisiro mhinduro. Zvisinei, kunatsiridza kutaridzika kweganda zvinogoneka, zvose nemishonga chaiyo, uye nemishonga yechisikigo yakadai seiyo yatinokusiya pazasi.
1 Mushonga wakanakisisa, kudzivirira
1.1 Mishonga yema stretch marks
Mushonga wakanakisisa, kudzivirira
Kutambanudza mavara, sezvatakareva, anogadzirwa nekutsemuka kwetambo dzeganda. Izvi zvinoitika kana ganda rakatambanudzwa zvisina kujairika, kazhinji panguva yekuchinja kamwe kamwe uremu. Zvinoitikawo panguva yekuzvitakura, kwete chete nekuda kwekuchinja kwehuremu, asiwo nekuda kwehomoni zvinhu. Zvimwe zvinogara zvichikonzeresa inhaka yemajini, kunwa mimwe mishonga kana kudya kwakashata kusingavharise zvinovaka muviri zvakakosha.
Kuti vasaonekwa tatamuka mamaki paganda, zvakanakisisa kutora matanho ekudzivirira. Yekutanga uye inonyanya kukosha ndeye hydration, nekuti ganda risina mvura rinowanzoita kupera simba uye kutyora. Chechipiri chikafu. Idya chikafu chechisikigo, tevera kudya kwakasiyana, kwakadzikama uye kuri pakati nepakati kudzora uremu hwako. Nekuti iyi ndiyo yechitatu uye yakakosha kiyi yekudzivirira kutambanudza mamaki.
Kuchinja kwehuremu kamwe kamwe ndicho chikonzero chikuru yekuonekwa kwemavara akatambanudzwa paganda uye iyo inonyanya kutadzisa kurapwa kwavo. Edza kugara pahuremu hune hutano uye kana uchizotevera slimming yekudya, ita shuwa kuti inovhara zvaunoda zvinovaka muviri kuitira kuti kurasikirwa kuenderere mberi uye kusaparadze ganda rako. Zviise mumaoko enyanzvi uye iwe uchazadzisa zvinangwa zvako.
Mishonga yema stretch marks
Dzimwe nguva kutambanudza mamaki kunoonekwa kunyangwe iwe uchitarisira uremu hwako uye ganda rako, nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Muchiitiko ichocho, iwe unogona kushandisa chero ipi yeinotevera mishonga yekutambanudza mamaki. Mishonga yemasikirwo uye yemumba iyo ichakushamisa iwe, gara uripo uye munguva pfupi iwe uchaona mutsauko.
Mafuta anotapira omuarumondi. Chigadzirwa chechisikigo chine zvinhu zvinovandudza uye vhitamini E inonyorovesa ganda pakadzika.
Aloe vera. Yakakwana pakurapa mared stretch marks uye kudzivirira kubva kuchena. Isa iyo aloe vera pulp zvakananga pane zvakatambanudzwa, kaviri pazuva kusvika iwe waona kuvandudzwa.
Ndimu muto. Yakapfuma mu vitamin C, antioxidant uye whitening effect. Svina ndimu, soak donje pads uye wozora pane stretch marks. Siya kwemaminetsi gumi nemashanu wozogeza nemvura inodziya.
Horsetail. Mukuwedzera pakubatsira zvakanyanya kubva mukati, bhiza rinoshandiswa zvakananga paganda rinovandudza kutaridzika kwekutambanudza. Izvi zvinodaro nekuti inovandudza masero eganda uye inoigadzira patsva. Gadzirira infusion nemabhegi maviri uye shandisa mvura paganda, uchikwiza mukufamba kwedenderedzwa kusvika wanyura.
Iyo mbatatisi. Muto wembatatisi unobatsira zvakanyanya pakurapa ma stretch marks. Izvi zvinodaro nekuti chinhu chinobatsira kudzorera masero eganda. Iwe unongofanira kucheka chidimbu chembatatisi mbishi uye woisa muto wayo pane zvakatambanudzwa. Siya anenge maminitsi gumi nemashanu uye kana muto wembatatisi waoma, bvisa nemvura inodziya.
Iyi mishonga yema stretch marks inoshanda zvinoshamisa, asi kuti uone mhedzisiro, zvakakosha kuti ugare wakamira. Kana iwewo uchirovedza muviri nguva dzose uye uchitevera kudya kwakapfuma mumichero, miriwo uye zvokudya zvepanyama, ganda rako richavandudza kubva mukati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Runako manomano » 5 mishonga yechisikigo yekurapa stretch marks
5 vavengi vehukama